Maitiro Ekukurira Kukwana: 8 Nzira dzekugamuchira Zvishoma Kupfuura Izvo Zvakanakisa - Pfungwa
Zvazvinzvanya muchinyorwa chino, zvimwe chikamu chako unofanirwa kupedzisira wagamuchira kuti kukwana kukwana hakusi hunhu hwakanaka nguva dzose.
Inogona kunge yakadzika midzi muchishuwo chekumisikidza yakakwira zviyero iwe pachako, asi inotora nhanho imwe zvakanyanya kure.
Kuita zvine huso hwakakwana kunoitika kana nhanho ine hutano yekukwikwidza ikashanduka ikava nhanho isina tariro yekutarisira.
Uye zvakadaro, tichitarisa mukati kubva kunze, vazhinji vedu tinoona kukwana sechinhu chakanaka…
Isu tinowanzo funga zvine hungwaru kuti hupenyu hwedu pachedu hunogona kuva hunoshamisa zvakadii dai taikwanisa kuwedzera mamaira ekuwedzera kuti tigadzire zvinhu 'zvakangodaro.'
Isu tinowanzo doma shamwari dzedu kana nhengo dzemhuri sevanoda kukwana nekuda kwekuti ivo vanopfuura nepamusoro uye vanoisa mukuwedzera simba kupfuura zvataizoita mumamiriro akafanana.
Isu hatisi kuona zvakaderera. Tinongozviona sekuedza ku…
Izvo, shure kwezvose, nzira iyo isu takarongedzwa zvese kuburikidza nehucheche hwedu, handizvo here?
'Shingairira kuve wakanyanya kugona iwe uye gara uchiita zvakanyanya kugona iwe' yaive meseji yakatsva muma psyche edu.
Uye izvo zvakanaka uye zvakanaka sekushuvira, asi chokwadi ndechekuti vazhinji vedu hatizvitore sezvazviri chaizvo.
Isu tinofara tichigunun'una mukati mehupenyu tichiita zvinhu zvine hunyanzvi ... uye yakawanda yenguva dzino buda zvakanaka.
Kune wechokwadi anoita zvakakwana, zvakadaro, kutsvaga kwekugona muzvinhu zvese kunogona kuve kwakanyanya.
Sezvo zviri pachena zvisingaite kuwana uye kuchengetedza kuita kwakakwana muzvinhu zvese nguva dzose, vanoremerwa nekuramba vachinzwa kuora mwoyo.
Vanokwanirisa vanotenda kuti yavo chete kukosha kuri mukubudirira kwavo kana izvo zvavanoitira vamwe vanhu. Ivo vanogara vachikurirwa nepfungwa yekuzvibvumira ivo (nevamwe) pasi.
Panzvimbo ino yepamusoro yekukwana, kuda kuzadzisa zvakanakisa mune zvese zvazvinogumira zvisingaite.
Uku kuganhurirwa kunogona kutora munhu akakwana kusvika padanho rekuoma mitezo - hapana chinoitwa zvachose kutya kukundikana .
Tsika yavo yekufungisisa inotungamira mukushushikana kuti mhedzisiro yacho haizosvike iwo chaiwo maitiro avanoda.
… Pakupedzisira, kusavimbika- uko kwakashata kunodzivirira chero chiito zvachose.
Izvo izvo vanhu vasina kukwana vasingakwanise kuona ndezvekuti zvikanganiso zvinobatsira chaizvo vanhu kuti vakure uye vagadzirise zvine hunyanzvi uye / kana ivo pachavo.
Chokwadi, vanogona kuve vakaomarara chaizvo kutora uye kazhinji zvinorwadza panguva iyoyo, asi, kazhinji nguva dzose, pakufungisisa pane chakanaka chekubviswa mumamiriro acho ezvinhu.
Kana chinangwa chemumwe munhu chisingambofa chakakanganisa, pane tsika yekumira mu 'ongororo yekuoma mitezo,' inokonzerwa nekufungisisa mamiriro ezvinhu nekuda kwekutya kwavo kukundikana.
Sezvo munyori wezvemabhizimusi uye anokurudzira Michael Hyatt anozviisa:
Kuita zvakakwana ndiamai vekuverengera.
Nekudaro, kure nekuzadzisa zvinopfuura isu vanhu vanoita zvakapusa, zvinova ndizvo zvaunofungidzira, mukwanisi anowanzozadzisa zvishoma - kupokana kunoshamisa zvirokwazvo!
Haisi nyaya chete inongo gumira kune vanoda kukwana ivo zvavo zvisingatarisirwi kwevamwe zvakare iri dambudziko, saka mhedzisiro yacho inopararira zvachose kunze.
Zvinenge zvisingadzivisike, hukama neshamwari, vadyidzani, nhengo dzemhuri, uye vashandi vekubasa vanozoiswa pasi pechisimba chikuru kana zvakawandisa zvichitarisirwa kwavari.
Kunyangwe avo vane hunyoro hwakakwana hwekutendeseka vanogona kuona kuti zvinokanganisa hupenyu hwavo hwese, hune chinokanganisa kubasa, chikoro, uye hukama hwehukama.
Nekudaro, sezvatakakurukura, kuita kwakakwana hakusi iko kukurudzira kune hutano kwaungafungidzira.
Kwete chete zvinokonzeresa nyaya dzehukama, chokwadi ndechekuti zvinogona kukonzera chaiko hutano hwepfungwa nyaya : kushushikana, kusagadzikana pakudya, kushushikana, kuzvikuvadza.
Ndezvipi Zvinokonzeresa Kukwana?
Kufanana nenyaya zhinji dzepfungwa, izvo zvinokonzeresa zvinowanzo kunetsa kudzika pasi.
Anenge nguva dzose, zvakadaro, iwo maitiro ehunhu hunodzidziswa semhedzisiro yezvinhu zvekunze. Uye inowanzo kuve yakadzika muhudiki.
Kupokana nezvamungatarisira, vabereki nevadzidzisi vanoomerera pavana vachirwira kukwana - uye mumatambudziko akaipisisa vanoranga avo vanowira pasi pezviyero zvakaomesesa -, zviripo, zvinopa kufunga zvisina kunaka uye maitiro ehunhu.
Kukwana kuita zvetsika zvinowanzo simbiswa neyakaomeswa-yekubika nharaunda yezvirongwa zvedzidzo.
Iko kudiwa kwekukunda kunoitwa mukati mevadzidzi uye kutyisidzirwa kwemhedzisiro yekundikana pahupenyu hwavo hweramangwana kunodzokororwa kazhinji.
Asi hazvisi kuchikoro uye kukoreji chete - vechidiki vanowanzo sundirwa kuti vawedzere-kubudirira mumitambo, futi.
Simba revaya vabereki vanomanikidza uye varairidzi vane mukurumbira vanonyanya kufunga nezvebudiriro, pamwe zvinosetsa, pakupedzisira zvinokanganisa kugona kwemudiki kuzviita.
Ndiwe Iwe Here?
Zvinogona kunge usina chokwadi kana kukwana kwako kuri kunetsa kana kutomboona kuti mashandiro aunoita ane zviratidzo zveiyi maitiro maitiro.
Kuti ikubatsire kuona maitiro anoratidza kukwana kukwana, heano mashoma ezviratidzo:
Kunzwa sekukundikana pazvinhu zvese zvisinei nekuyedza kubudirira.
Kutarisa nemitemo, zvinyorwa, uye nyaya dzebasa.
Kurwisana nekugovana manzwiro uye pfungwa.
Kuverengera kana watarisana nebasa nekuda kwekunetseka kuti hazvingakwanise kuripedza zvakakwana.
Kutora kudzora kusvika pakunyanyisa degree muhukama nemhuri uye / kana shamwari uye / kana vashandi pamwe navo.
Kusazeza kutomboedza basa nekuda kwekutya kukundikana.
Kana mamwe kana ese eaya mapoinzi achienderana nehupenyu hwako, unogona kunge uine ruzivo rwekuti kutsvaga kwako kukwana kunokutapura sei.
Sezvo nemhando ipi neipi yemaitiro, chishuwo chekukwana chakarara pamwe neyakawandisa kubva pane yakapfava kusvika kune yakaoma.
Saka, wadii tora bvunzo iyi kuziva kuti ndedzipi nzvimbo dzehupenyu hwako dzinokanganiswa uye kusvika papi.
Paunenge uchinge uine bhenji, iwe unozogona kutora mamwe matanho ekukunda yako obsession nekukwana.
Wabi-Sabi: Maitiro eJapan Anogamuchira Kusakwana
12 Mienzaniso YeKubvumidzwa-Kutsvaga Maitiro (+ Sei Kudonhedza Yako Kuda Kwekusimbiswa)
Nzira Nhatu Dzakatsanangurwa-Vanhu Vanosiyana Kune Vamwe Vese
8 Nzira dzeKukunda Yako Perfectionist Tendency
Sezvataona, iyo yese-kana-isina nzira yeanoda kukwana kwete chete ine mukana wekudzora chaiko kubudirira, asi zvakare zvinonetsa uye kunetesa.
Iyi mhedzisiro yakaipa haigone kuwedzera kusvika pakukwana, handiti?
Kana iwe wakaneta nezvese izvi zvekuwedzera kuedza uye kushushikana kusiri madikanwa uye uchinzwa kuti uri kuisa kumanikidza zvisina tsarukano kune avo vakakukomberedza, ungade kufunga nzira dzekugadzirisa zvaunotarisira zvinotarisirwa uye kukurira kukwana kwako.
Heano mazano mashoma enzira dzaungagadzirisazve maitiro ako kuti ufambe kupfuura kwaunogara uchirwira kukwana…
Unogona kunge uchitya mhedzisiro yekuwana zvishoma pane kukwana.
Unogona kuedza kuyedza nekukanganisa - pamwe uchivavarira 80% pachinzvimbo che100% - uye kuongorora mhedzisiro.
Iwe pamwe uchaona kuti avo vakakukomberedza havatozoona musiyano uye zvakadaro iwe unenge wakazvipa pachako zororo kubva pakutsvaga kwako kwekunakisisa.
Funga Nezve Zvikanganiso Zvekare
Tora nguva yekucherechedza zvikanganiso zvisingakanganwike zvawakaita kare. Zvisingarambike, mhinduro yemhando yepamusoro yekukanganisa kune idzi mhosho ichave yekuzvidemba.
Nekudaro, kana iwe ukafunga nezviitiko izvi nokungwarira, iwe unofanirwa kukwanisa kuona zvimwe zvakanaka mhedzisiro.
Pamwe iwe wakadzidza chimwe chinhu kana iko kukanganisa kwakareva kuti iwe wakakwanisa kutora mumwe mukana uyo wakazviratidza pachawo mukukanganisa kwekukanganisa kwako.
Maitiro e kutarisa pane zvakanaka mhedzisiro yekukanganisa inogona kukubatsira iwe kuigamuchira uye nekuzvipa iwe zororo kubva pakuzviranga pachako pazvinoitika zvisingaite.
Iva Anonzwira Iwe pachako
Mikana ndeyekuti musoro wako uzere nekutaura kwakashata-kwakasununguka, kununurwa neanotsoropodza wemukati uyo anotonga kuita kwako zvakaomarara.
Edza kuenzanisa hutsinye ihwohwo nezwi rinonzwira tsitsi.
Zviudze pachako zvakanaka kuti uve 'akanaka zvakakwana' uye edza kuzvibata iwe pachako nemutsa kana iwe ukakanganisa.
Kuteerera kune yakashata yemukati izwi uye nekuzvirova pachako pamusoro pezvikanganiso zvinongowedzera maitiro avo mupfungwa dzako.
Tarisa Izvo Zvinoitwa Nevamwe
Kashoma kuti tikurudzire vanhu kuti vazvifananidze nevamwe pano paA Conscious Rethink, asi mune ino inokosha mamiriro zvine musoro ...
zvinhu zvekuita nebestie yako
… Kana zvaitwa nenzira kwayo.
Tarisa-tarisa zvakakukomberedza kune vese vanhu vasiri kurwira kukwana. Avo vanhu vari kugadzikana 'zvakakwana zvakakwana.'
Vanoratidzika sei kwauri? Ivo vese vanonzwisa tsitsi uye havana kuzadzikiswa nekuti havasi vanogara vari shasha pane chimwe chinhu?
Muchokwadi, ivo vanogona kunge vari kufara kupfuura iwe. Ivo vakawanda akasununguka mafungiro inovabvumira kuti vagamuchire kana zvinhu zvingave zvisina kukwana.
Ivo vane zviyero chaizvo, vanoenderana nechero mhedzisiro yavanowana, vanofambira mberi, uye havazvirove vega.
Zvino zvibvunze: izvi zvinondidzidzisei nezve kukwana kwangu? Izvo zvakakwana zvese zvakatsemuka kuva?
Sarudza Chimwe Chinhu KuExcel At
Kukwana kunowanzo kwazara mukona yega yega yehupenyu hwemunhu. Asi hapana munhu anogona kuve anokwanisa kwazvo pane zvese zvavanoita.
Saka, pachinzvimbo, sarudza chinhu chimwe chaunokoshesa zvakanyanya muhupenyu hwako. Wobva waisa pfungwa dzako nesimba mukati mazvo kuti ugone kuzviita.
Izvi hazvireve kutora ziso rako kubva kubhora mune dzimwe nzvimbo dzehupenyu hwako iwe unofanirwa kuramba uchichengeta zvinhu zvichinetsa pamusoro mu'akanaka zvakakwana 'nzvimbo.
Asi maitiro aya anokupa iwe nzira yekubata yako yakakwana maitiro - kunyangwe iwe uchingovavarira kuenderera nekuvandudza kwete chiyero chisina mhosva.
Saka iwe unogona kuwana bhanhire dema mune yakasarudzika martial art, asi usafunge sekondi imwe chete kuti uchave wakanakisa pasirese, ndoda kirasi yako.
Kana iwe unogona kuenda kunze kwese kugona kuridza piyano kune konzati, asi usatombo kunetseka nezve imwechete noti kunze kwenzvimbo panguva yekuita.
Izvi zvinoratidzira kumashure kune chinangwa che80% pachinzvimbo che100% uye iri fomu yekurapa kwekuratidzira.
Kana iwe uchinyatsoda kuona kuti nyika ichiri kutendeuka kunyangwe iwe usina kukwana, ita zvikanganiso zvekuziva iwe zvaungadai wakadzivisa chaizvo.
… Asi zviite zvidiki izvozvi.
Saka nyora email uye sanganisira typo. Kunyanya-kubika iyo brownie yauri kugadzira. Siya imwe kona yekamuri yako yekurara mune yakasviba kwevhiki rese!
Denga haridonhe. Hupenyu huchaenderera mberi. Cherekedza uye dzidza kubva pane izvi.
Gadzira Imwe Isina Kukwana Art
Kugadzira basa rehunyanzvi kunogona kuzorodza zvisingaite. Iyo inogona kukuchengetedza iwe kunamatira kune iyo yazvino nguva iwe sezvaunoburitsa yako yekugona kugona.
Uye chinhu chikuru nezveunyanzvi ndechekuti hazvidi kuve zvakakwana. Runako rwehunyanzvi ruri muziso remuoni. Hapana chidimbu cheunyanzvi chinganzi chakakwana.
Saka tenga kanivhasi uye mamwe mafuta pendi kana imwe modelling ivhu uye uone zvaunogona kuuya nazvo.
Kana iwe ukasarudza kuveza kana kupenda, pamwe edza cubism kana kufungidzira sezvo aya masitayera asingavimbe nemhedzisiro kuve yechokwadi fanika yezvauri kuyedza kuratidza.
Uye ivhu kana zvivezwa zvichagara zvine zvikanganiso uye inonamira-kunze mabhureki, saka haufanire kunetseka nezvawo.
Kana wapedza, kudada yezvawakagadzira uye nehunhu hwayo husina kukwana.
Bvisa Zvinhu Pasi
Iyi shanduko yakapusa yematauriro inogona kukubatsira iwe kukurira ako ekuda kukwana nhanho-nhanho:
Gadza pachako zvinokwanisika, zvinokwanisika zvinangwa.
Paza mabasa anogona kukurira mumatanho anokwanisika.
Tarisa pane rimwe basa panguva .
Bvuma kuti ndewemunhu chete kukanganisa.
Ziva kuti akawanda mhosho anonyatso batsira pakudzidza uye kukura.
Ramba uine chokwadi pamusoro pezvingaitika kubudikidza nekutya kutya kukundikana.
Sezvo, sezvatakakurukura, uyu maitiro ehunhu anga ari nguva yakareba mukugadzirwa, haizove yekukurumidza kugadzirisa.
Ndinovimba, nekutora mamwe emazano ari pamusoro, munguva pfupi iwe uchakwanisa kubva kune iyo-kana-isina nzira yehupenyu.
Iwe unozofanirwa kuzviyeuchidza iwe nguva nenguva kuti zvakanaka kuti usave wakakwana uye kuti uzvipe mvumo yekudzikisa maziso ako kubva pakakwirira pekukwana iwe wawakaona kare sechinangwa chakakosha chete.
Munyori Harriet B.Braiker akanyatso pfupisa mhedzisiro yakaipa yekukwana:
Kuvavarira kugona kwakanaka kunokukurudzira iwe kurwira kukwana kwakadzikisira.
chii chinoita kuti murume aremekedze mukadzi
ndeipi pfungwa yeiyo
mutsauko wekuda uye kuve murudo
kuita sei kutonhora moyo
kubata nevanhu vasingakudi